Kusemthethweni, uXiaomi ufika eSpain kunye neemveliso ezinomdla kakhulu kunye namaxabiso | Iindaba zeGajethi
Emva kwamarhe amaninzi kwaye ngakumbi izimvo zazo zonke iintlobo ezinxulumene ngakumbi kubukho begama elinjenge Xiaomi eSpain kunye neemveliso ezinokuzithengisa okanye amaxabiso azo, ekugqibeleni, kumsitho obanjelwe eMadrid, inkampani yaseTshayina ibhengeze kungekuphela nje Ukufika ngokusemthethweni kwilizwe lethu, kodwa kuyakwenzeka nge Ukuvulwa kweevenkile zayo zokuqala ezimbini ezisemthethweni.
Uluvo analo uXiaomi kukuba akwazi ukwandisa kancinci kancinci kwiNtshona Yurophu kwaye basebenze iinyanga ezininzi kuphuhliso lwesicwangciso esiya kujikeleza kumanqaku amathathu asisiseko, njengokubonelela Iinkonzo ze-Intanethi, hamba kuvulwa iivenkile ezintsha ngokuhamba kwexesha kunye nikela ngezixhobo zodidi lobugcisa ngexabiso elitshiphu kunabakhuphisana nabo bangoku.
1 E-Xioami banomdla kakhulu ngokufika kwakhe eSpain kunye nolwandiso olulandelayo eYurophu
2 Abasebenzisi baseSpain Xiaomi ngoku baya kuba nesiqinisekiso esingcono kunye nenkonzo yezobuchwephesha eSpanish
E-Xioami banomdla kakhulu ngokufika kwakhe eSpain kunye nolwandiso olulandelayo eYurophu
Ngamazwi ka Mnu Wang, U-Sekela Mongameli oLawulayo:
Namhlanje lusuku lwembali kuthi, njengoko luphawula ukuqala kwesahluko esitsha kwizicwangciso zethu zokwandiswa komhlaba.
Siyavuya kakhulu ukuthatha eli nyathelo lokuqala kwaye singene eNtshona Yurophu, siqala ngeSpain. Emva kweminyaka emininzi sinenkxaso engenamiqathango yeeMi Fans zethu kwintengiso yaseSpain, sonwabile ukukwazi ukwazisa ngokusesikweni iimveliso zethu apha kubo bonke nakuluntu ngokubanzi.
Kwelinye icala, kwaye kulandela iinkcazo ezenziwe nguMnu Wang, ezivela kwinkampani yaseTshayina baqinisekile ukuba iimveliso zabo, ngokufanayo Ziya kufumaneka eSpain ukusukela ngomso kwiwebhusayithi iMi.com/es okanye kwamanye amaphepha amanyeneyo anjengeAliexpress okanye iivenkile ezinkulu, zinokuba lukhetho olunomtsalane kubo bonke abathengi, ngakumbi ngenxa yomxube wetekhnoloji, izinto ezintsha kunye namaxabiso.
Abasebenzisi baseSpain Xiaomi ngoku baya kuba nesiqinisekiso esingcono kunye nenkonzo yezobuchwephesha eSpanish
Yintoni esinokuyilindela emva kokufika kukaXiaomi eSpain? Inkampani inombono wokufika kancinci kancinci, oku kuthetha ukuba ekuqaleni ikhathalogu yemveliso iya kuba nemida. Ukuze ufumane umbono wento onokuyilindela, ndikuxelele ukuba okwangoku zimbini kuphela ii-smartphones zabo eziza kuthengiswa kwilizwe lethu kunye nezixhobo ezininzi 'Inkqubo yendalo yam'.
Ngokumalunga noluhlu lwee-smartphones onokuzithenga eSpain ukusukela ngomso, kufanele kuqatshelwe ukuba izinikezele kwiziphelo ezibini eziphumeleleyo kwilizwe lethu, ezinje nge I-Xiaomi MiX 2Isiphelo esinezixhobo eziphezulu ezixhotyiswe ngetekhnoloji enje ngeprosesa ye-Snapdragon 835, i-6 GB ye-RAM, i-64 GB yokugcina kwaye, mhlawumbi eyona nto iphawuleka kakhulu ngefowuni, isikrini esikhulu se-5,99-intshi. Le smartphone iya kufumaneka 499 euro, ixabiso elibeka kakuhle kakhulu ngokubhekisele kwiitheminali zangoku eziphezulu kwaye ezimele kuphela ukonyuka malunga nee-euro ezingama-40 xa kuthelekiswa nexabiso esinokulufumana kumaphepha ahlukeneyo amaTshayina.
Njengokhetho lwesibini esilufumanayo Xiami Mi A1, iselfowuni esime ngaphandle ekuxhobiseni i-Snapdragon 625, 4GB ye-RAM, i-64GB yokugcina ngaphakathi, ikhamera ephindwe kabini kunye nenkqubo yokusebenza ehlaziywa ngokuthe ngqo nguGoogle ngenxa yokusebenzisa i-Android One. iya kuba 229 euro, malunga nama-30 okanye ama-40 eeuro ezibiza kakhulu kunamaphepha athile.
Ngokumalunga namanqaku ahlukeneyo akhoyo kwikhathalogu 'Inkqubo yendalo yamSifumana iindlela ezahlukeneyo ezinje nge Mi bhokisi, Umdlali wemultimedia nge-Android TV eya kufumaneka ngee-euro ezingama-74'99, ezihlala zinomdla kwaye zithandwa Mi Band 2, Isacholo sokulinganisa kunye neentsuku ezingama-20 zokuzimela eziya kuba nexabiso lama-euro angama-24, ikhamera yesenzo, Ikhamera yam yentshukumo ye4K, Ye-134'99 euro okanye Isikuta sam sombane, Isikuta sombane esineekhilomitha ezingama-30 zokuzimela kunye nokuqhekeza okuhlaziyayo okuya kubakho ngee-euro ezingama-349'99.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » Kusemthethweni, uXiaomi ufika eSpain kunye neemveliso ezinomdla kakhulu kunye namaxabiso
Ikhamera ye-YI yangaphandle, ukhuseleko lwasekhaya ngexabiso eliphantsi
Fihla, ii-headphone zentloko yendlebe ze-Cellularline zifikile